Lohahevitra vaovao ho an'ny KDE OpenSuse 12.3 | Avy amin'ny Linux
Lohahevitra vaovao ho an'ny KDE OpenSuse 12.3
satanAG | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Vao hitako fa vonona izy (farafaharatsiny mba hahitana) ny lohahevitra vaovao izay hitafy OpenSuse amin'ny andiany 12.3 miaraka amin'ny tontolon'ny birao KDE. Tokony holazaiko aloha izany rehetra izany, hitako fa tena tsara tarehy izy, afaka jerenao ny asan'ny mpamorona satria ny vokany, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao, tena voadio.
Araka ny hitantsika dia tena kanto.
Toa tsy dia misy dikany loatra ny lozisialy, ary tena tsara tarehy ireo sary masina.
Araka ny hitantsika dia toa tsara amin'ny lohahevitra rehetra ny lohahevitra. Hitako fa mahonon-tena, kanto izy io ary manome fikitika sy fanatsarana ny fizarana. Na izany aza, ho an'ity lohahevitra ity dia misy zavatra roa nohazavaina:
Ny lohahevitra dia miompana indrindra amin'ny KDE 4.10, ka tsy afaka ny ho tonga lafatra amin'ny KDE 4.9;
Mbola tsy voafidy ny valim-panafarana default.
Farafaharatsiny farafaharatsiny izao dia tsy maintsy miandry isika vao handray an-tanana azy….
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Lohahevitra vaovao ho an'ny KDE OpenSuse 12.3
Tena tsara, misaotra nitondra an'io taminay. OpenSuse ve ny distro miaraka amin'ny fampidirana KDE tsara indrindra? Izany no ilazako azy satria tsy mbola nampiasaiko io ary raha sendra te-hanandrana aho. ny fotoana tokana nodinihako azy taona lasa izay ... nanenika ahy tao anatin'ny 10 minitra ary nesoriny. Tsy nahita na inona na inona aho.
Tena tsy haiko satria nampiasa KDE niaraka tamin'i Debian sy tamin'ny OpenSuse aho. Amin'ity farany ity dia afaka milaza aminao aho fa ny fampidirana dia mahatalanjona, ny zava-drehetra amin'ny toerany, mahafinaritra be daholo ny zava-drehetra.
Tsy misy fampidirana betsaka miaraka amin'i Debian fa afaka mahavita vokatra tena tsara ianao amin'ny ezaka bebe kokoa.
TENA MAFY ny marina. Miandry an'i ELAV hanao torolàlana handao ny KDE mitovy amin'ny 3… 2… .1
Hahaha, tsia. Izaho dia mbola mandamina tsara ny Style de l'EdE ElementaryOS 😀
Rehefa vitanao izany dia aza adino ny mametraka mpitari-dalana dia tianay izany
Raiso ho azy ity.
Noho ny lesoka dia tsy afaka nanitsy ny lahatsoratra aho, saingy nanadino ny mitanisa ny loharanon'ireo sary sy ireo fampahalalana:
Ny ekipa OpenSuse dia niavaka hatrany noho ny fikolokoloana napetrak'izy ireo tamin'ny kanton'ny KDE. Mbola tadidiko fa nisy haingon-trano teo am-baravarankely izay nitondra ilay chameleon (tsy haiko raha mbola hisy lohahevitra toa izany), izay nanome azy kanto sy maha-izy azy. ary ity lohahevitra vaovao ity dia toa tsara tarehy, mitovy amin'ny kalitaon'ny distro.
Taiza no nahitanao azy? azonao atao ve ny mametraka ny rohy?
Ny mpanoratra dia mametraka ny loharano ao anaty hevitra etsy ambony. Mila manitsy ny lahatsoratra aho mba hampidirina azy .. 😉
Kanto ny lohahevitra, fa ny lohahevitry ny lahatahiry amin'ireto KDE farany ireto dia ratsy tarehy mahatsiravina, ratsy tarehy ratsy tarehy, mihoatra ny ratsy tarehy, heloka bevava hita maso ... izany ve tsy misy mahita ao amin'ny KDE?
Manaiky aho. Ny zavatra ataoko foana aorian'ny fametrahana madio ao amin'ny KDE dia ny fanovana ny lohahevitra Oxygen, noho ny mampihoron-koditra ireo kisary fampirimana. Ireo kinova taloha dia nisy famaranana kanto, tena voadilana sy kanto tokoa, saingy nanomboka inona ny fanavaozana? ny napetrak'ireo sary masina ... misaotra fa misy ny MIB-Ossigeno-Icons, KFaenza na ROSA Icons ankoatry ny hafa.
OpenSuse dia distro KDE hatry ny ela .. Mahatalanjona ny kanto ananany, tiako izy ..
Tsara ny marina ary izany dia mahatonga an'i KDE ho tsara tarehy kokoa, izay efa tsara tarehy. Raha izaho manokana dia mieritreritra aho fa ireo tovolahy ao amin'ny openSUSE dia elaela vao nanao lohahevitra iray hanomezana ny toetra maha-izy ny KDE sy ny fampidirana azy amin'i Gecko.
Manoro hevitra aho ny hanjavonan'ireo manga ary hifantoka amin'ny maintso, satria io no loko mampiavaka ny distro ary raha ny hevitro dia ho KDE feno tanteraka izy io.
Oh yeah, ity hira ity dia manosika ahy handao ny distro tiako indrindra, Fedora, tamin'izay.
Hmm… Tsy dia andevozin'ny lohahevitra maizimaizina Vista aho fa raha tianao ity lohahevitra openSUSE ity dia mety tianao ihany koa ireo, azo sintonina avy ao anatin'ny KDE na amin'ny alàlan'ny KDE-Look.org:
Dark_Suse (hoditra mainty tsara tarehy hoditra misy marika openSUSE)
Ronak (lohahevitra ofisialy Chakra io)
Na dia tiako kokoa aza ny sasany noho ny hafa, misy antsipiriany foana tsy maharesy lahatra ahy, indrindra momba ny sary famantarana boaty.
Amin'ireo Distros 6 mizara habaka amin'ny kapila mafy ataoko dia io no tena tsy tiako .. Fa na izany aza, TSY AZoko avela !!
Mbola tiako io !! hehehe .. Miandry ny 12.3 ..
«Amin'ireo Distros 6 mizara habaka amin'ny kapila mangirana»
Ary inona no ataonao amin'izany rehetra izany!? Miezaka manapa-kevitra ve ianao hoe iza no hotanana!? Maninona ianao no tsy mampiasa milina virtoaly fa tsy fampitaovana ara-batana!?
Efa miteny aminao lahy aho. Ovao ny solon'anaranao ho an'ny versionitis maranitra.
Mampiasa VirtualBox aho fa mahazo aina kokoa, mendrika ny tsy manome fampisehoana firy, fa raha tsy izany dia tsy hahita distro hafa noho ny hakamoana aho.
Ehh ehh, isika izay manana versionitis maranitra no mpandefa zana-tsipìka!
Faly aho amin'ny OpenSUSE, fizarana izay namela ahy fahatsiarovana tena mahafinaritra na dia lavitra ny GNU-Linux nandritra ny fotoana fohy aza aho.
Heveriko fa mitovy amin'ireo izay maneho hevitra fa somary lany andro ny sary masina mifandraika amin'ilay lohahevitra
Mifanohitra amin'ny GNU / Linux maninona ary amin'ny heviny ahoana?
@VaryHeavy Mampiasa Windows fito amin'ny kahie nindramina aho. Nisy ilay milina niaraka tamin'ny OS efa napetraka ary raha ny marina dia mandeha tsara izy. Noho izany antony izany dia tsy mandalo matetika amin'ity bilaogy na forum ity aho, indraindray dia mampiasa an'ity Debian ity avy amin'ny ny asa efa saika manana 3 taona ary mitohy miasa toy ny mahazatra na dia feno aza ny kapila mafy. Mbola ao am-poko ny foko, saingy miaiky aho fa manana ahiahy be aho amin'ny fotoana farany hanamboarana rafitra iray hatramin'ny voalohany.
Raha mametraka distro indray aho dia hiankina amin'ny OpenSUSE izay na dia vonona hampiasa aza aho dia hiady amin'ny karazana olana amin'ny fametrahana lahatsoratra ary tena manana ny lohako any an-kafa aho.
Toa tsara izany, tiako izany! Mampalahelo fa mbola tsy afaka manaporofo izany isika.